Herin'ny Thermal sy ny nokleary - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny fitomboan'ny fitsipiky ny tontolo iainana dia nitarika ny angovo hamoaka herinaratra hitifitra ireo teknolojia mikorontana vaovao. Ny teknolojia mikapoka mando avy amin'ny rano mando (FGD) dia misy vahaolana amin'ny slurry misy tazo izay mety hanimba sy hanimba ny natiora.
Raha ampitahaina amin'ny vy karbonina sy alloy, plastika nohamafisin'ny fiberglass (FRP) dia hita fa vahaolana azo itokisana sy lafo vidy.
Ny fikarohana sasany dia naneho fa ny famokarana miaraka amin'ireo fitaovana mampitambatra dia mampiasa angovo tsy latsaky ny angovo raha ampitahaina amin'ny alloy metaly sy konkrit.
Ny vidin'ny famokarana sy ny fikojakojana dia manaporofo fa ambany kokoa raha ampitahaina amin'ny fitaovana mahazatra.
Noho izany dia nanjary singa manan-danja amin'ny fizotran'ny herinaratra maro ny FRP.
Mitombo haingana ny filana ireo vokatra ireo satria mihamitombo ny fitakiana dingana, mitaky vahaolana fanoherana haingana kokoa.
Ny vokatra fibre mahazatra mifandraika amin'ny indostrian'ny menaka sy niokleary dia fitoeran-tsofina mijoro be fibre, linre ho fitoeran-tsangana sy varahina, rindrina vy izay manohana fibresy / tsimenon-tsolika, tohatra, fitehirizana fitoerana fitehirizana sy vilia, kitapo, rafitra fantson-tsolika maimaim-poana, fantsom-baravarana feno, fantson-drano , rafi-pandrefesana, baomba, tilikambo, fofona sy fofona rivotra, fofona, sns.
Azon'izy ireo atao ny:
- Serivisy fanitsiana
- serivisy fanasiana olona
- serivisy mety
- serivisy hafanana haavo
- Serivisy mirehitra afo hahatratra ny fiparitahan'ny afo 1
Satria nahazo toky ny FRP amin'ny alàlan'ny fahombiazana azo antoka, ny fangatahana herinaratra dia efa nitatra hatrany ny fangatahana ny FRP.
Ny rafitra mavesatra ary ny rafitra fonosana tilikambo dia manohitra ny fiadiana simika ary maivana kokoa ho mora fanaraha-maso sy fametrahana. Izy ireo dia miaro ny toetrandro ary mora tazomina miaraka amina gel-palitao ivelany sy fiarovan'ny UV. Vokatr'izany dia tena mety ho an'ny indostria mafana sy ny nokleary izy ireo.
Miorina amin'ny traikefa niainany nandritra ny taona maro niasana an'ity tsena ity, Jrain dia mahay manana ny famolavolana, ny fanamboarana, ny fametrahana sy ny serivisy FRP ary ny vokatra laminate roa ho an'ny filanao manokana.
Ny fenitra iraisam-pirenena azon'ny Jrain manaraka dia ny ASME, ASTM, BS, DIN, sns.
Famolavola grating, Masinina fanamafisana GRP, hamolavola, Nohavaozina Fiberglass, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Mamatotra fanamafisana FRP,